मुक्तिनाथ विकास बैंकद्धारा कालिकोटका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सहयोग | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more मुक्तिनाथ विकास बैंकद्धारा कालिकोटका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सहयोग
भदौ २३ गते, २०७६ - १५:१२
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले कालिकोटका विद्यार्थीलाई वित्तिय सहयोग गरेको छ । बैंकले कालिकोट सामुदायिक विद्यालयबाट एसइई उत्तिर्ण ६ जना विद्यार्थीलाई सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत तिन लाख रुपैयाँ वित्तिय सहयोग गरेको हो ।
बैंकले उपलब्ध गराएको वित्तिय सहयोग एसइई पास गरि काठमाडौंमा आउन खोज्ने ६ जना विद्यार्थीलाई दिइनेछ ।
सहयोग स्वरुपको उक्त रकम एक कार्यक्रमका बीच बैंकका सहायक नावय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिल गुरुङ्गले कर्णाली प्रदेश पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्र कालिकोटका अध्यक्ष टेकराज शाहीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । बैंकले उपलब्ध गराएको उक्त रकम गरिब, अपाङ्ग, द्धन्द्धपीडित, दलित, महिला र आदिवासि विद्यार्थीलाई सहयोग स्वरुप दिईने जनाइएको छ ।
मुक्तिनाथको चाडपर्व अफर
हालै मुक्तिनाथ विकास बैंकको आफ्नै रेमिट मुक्तिनाथ रेमिटबाट चाडपर्वलाई लक्षित गरी रेमिट्यान्स अफर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले भदौ १ देखि कात्र्तिक ३० सम्म लागू हुने गरी ‘७६ साल ७६ उपहार, चाडपर्वसँग खुसीको वहार’ सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको उक्त अफरमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको मुक्तिनाथ रेमिट प्रयोग गर्ने ७६ भाग्यशालीले स्कुटरदेखि विभिन्न उपहारहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
भदौ २३ गते, २०७६ - १५:१२ मा प्रकाशित
शेयर कारोबार : २६ अङकको सुधार हुँदा नेप्से १३०० माथि
रसुवा भन्सारबाट ६ महिनामै सात अर्ब ३३ करोड राजश्व सङ्कलन
फेरि बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति छ ?
बुधबार अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो, अरु देशकाे कति छ ?
लगातार बढेको सुनको मुल्य आज फेरि घट्यो, तोलाको कति छ ?